J&J /no.2 Ingaphakathi langoku/ Ikhefi yeemvakalelo/ Indlu yokungcamla/ 💙 entsha evuliwe 💙
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguJ&J
💙 J&J no.2 yangaphakathi yangoku isanda kuvulwa 💙
💙Umoya wale mihla Upholile kwaye ukhululekile indawo 💙
Ingaphakathi langoku lilula kwaye lipholile, ngoko lilungile ukuphilisa.
Zonke izinto ezibalulekileyo kunye nezongezelelweyo kwipropathi zinikezelwe.
I-J & J no.2 i-Instagram cafe eyaziwayo kumgangatho we-1 kunye nendlu kumgangatho we-2.
* Kumgangatho we-3 ngaphandle kwe-elevator, amagumbi okulala ama-2, igumbi lokuhlala, ikhitshi kunye ne-loft terrace yahluliwe, ngoko kulungile ukuphiliswa.
*Indawo yokuhlala eqhelekileyo ngabantu aba-2 kwaye abona bantu baninzi bahlala abantu aba-3.
Inani labatyeleli (ukungena) elingasekelwanga kwindawo yokuhlala
Intlawulo eyongezelelweyo iya kuhlawulwa ngokusekelwe kumgangatho.
Ndicela ungaqhathi inani labantu.
(ayibuyiswa ukuba ibanjiwe, inyanzeliswa ukuba ihambe)
*Ukuzijonga ubuso ngobuso
Ukunika undwendwe ngalunye igama lokugqitha
(Fakela isitshixo socango lwedijithali ukwenzela ukhuseleko.)
Jabulela ukuphumla okukhululekile ngakumbi kunasekhaya kwindawo yangaphakathi yanamhlanje.
Philisa nesithandwa sakho, usapho kunye nabahlobo kwindawo entsha neyanamhlanje ~
Thatha iifoto zomoya kwindawo yangaphakathi yangoku kwaye ushiye iinkumbulo zakho ~
Kwi-cafe ye-Instagrammable kumgangatho wokuqala wehotele
Shiya iinkumbulo zakho
Kukho ivenkile ekulula ukuhamba kuyo imizuzu emi-3 kufutshane nehotele, ukuze ukwazi ukuthenga izinto eziyimfuneko ngokulula.
Kufuphi nezibhedlele, izikolo, iibhanki, iicinema kunye namaziko okuthenga akufuphi, ngoko ilungele ukuhlala ixesha elide.
I-Suwan-dong ikwayindawo elungileyo yokusebenzisa iithiyetha zemiboniso bhanyabhanya, iiLotte Outlets, iindawo zokutyela ezidityanisiweyo ezithandwa lulutsha, kunye neendawo zokutyela ezintle ezineemvakalelo.
I-U-Square (iSiteshi seBhasi saseGwangju) kunye neSikhululo saseGwangju Songjeong zikwimizuzu eli-15 ukuya kwengama-30 ngemoto.
IDamyang (Juknokwon, Metasequoia-gil, Sosowon, Chuwolsan, Damyangho waterside road) kunye neJangseong (iTempile yaseBaekyangsa, indlu kabhuti kaHong-gil, iJangseong Dam Suspension Bridge) ifumaneka kwimizuzu engama-25-30 kude.
Ukuba usebenzisa izithuthi zikawonke-wonke, kukho indawo yokumisa ibhasi ngaphakathi kohambo lwemizuzu emi-2-5.
Kukho ipaki ekufutshane, ngoko kulungile ukuhamba.
44" HDTV ene-I-Chromecast, I-Netflix, intambo yepremiyamu
Izixhobo eziluncedo ezinjengezibhedlele, izikolo, amaziko emfundo, iithiyetha bhanyabhanya, iibhanki, iindawo zokuthenga, iDaiso, iiresityu, iikhefi, njl.
I-U-Square (i-Gwangju Terminal) kunye ne-Gwangju Songjeong Station zi-15-30 imizuzu kude ngemoto.
IDamyang (Juknokwon, Sosowon, Metasequoia-gil, Chuwolsan),
IJangseong (iHonggildong Park, iTempile yaseBaekyangsa, iJangseong Dam Suspension Bridge) ikwimizuzu eli-15 ukuya kwengama-30.
ISuwan-dong ilunge kakhulu kwizibhedlele, izikolo, iivenkile zeLotte, iimart, iidaisos, iithiyetha bhanyabhanya, iidolophu zokutya kunye neendawo zokutyela ezintle ezineemvakalelo ~
Kukho ipaki encinci kufutshane, ngoko unokuthatha uhambo olupholileyo.
Umbuki zindwendwe ngu- J&J
Mholweni. Lo ngumgcini we-J&J :)
Silawula ngokupheleleyo ukunika indawo ecocekileyo ngamaxesha onke. Ngonxibelelwano olukhawulezileyo, sizama ukunceda iindwendwe zethu ngokukhawuleza ukuba zinokuphazamiseka. Yiba nohambo oluhle nolumnandi. Enkosi ~
Ukuba iindwendwe zifuna ukunxibelelana, zinokusebenzisana ngobubele kwaye ziphendule yonke imibuzo~^^ Sihlonipha ubumfihlo babo bonke abafuna ukuhlala ngokuzolileyo~^^
Ungaqhagamshelana no-Airbnb ngomyalezo, ngesms, kwaye phantse yonke imibuzo ngefowuni!
Silawula ngokupheleleyo ukunika indawo ecocekileyo ngamaxesha onke. Ngonxibelelwano olukhawulezileyo, sizama ukunceda iindwendwe zethu n…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Suwan-dong, Gwangsan-gu